Home Wararka Mudaharaad looga soo horjeedo Farmaajo oo lagu qabtay London (Daawo Sawirada/Video)
Mudaharaad looga soo horjeedo Farmaajo oo lagu qabtay London (Daawo Sawirada/Video)
Waxaa maanta mudaharaad balaaran lagu qabtay wajiga hore ee aqalka looga taliyo dalka Ingiriiska. Mudaharaadka oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan ayaa waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee loo fasaxo dadka Soomaaliyeed in lagu qabto wajiga hore ee xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Dalka Ingiriiiska. Xiiriirka u dhaxeeya Dowlada Farmaajo iyo dowlada Ingiriiska ayaa waxa uu marayaa xaaladii ugu xumayd iyaga oo dowlada Ingiriiska ay ka gaabsatay in ay si joogta ula xariirto dowlada Farmaajo. Mudaharaadka maanta waxa uu sii adkeynayaa mowqifka dowlada Ingiriiska ee ku aadan Farmaajo iyo dowladiisa.
Saaxada dalka Ingiriiska iyo kuwa Soomaalida ayaa hadal haya mudaharaadka maanta. Dadka halkaa isugu soo baxay ayaa watay boorar ay ku qornaayeen halheysyo looga soo horjeedo Farmaajo iyo Dowlada Qatar. Waxaa sidoo kale dibad baxayaasha ay halkaas ku soo bandhigeen sawirada Shiikh Mukhtaar roobow iyo dadkii lagu xasuuqay magaalada Baydhabo.
Sidoo kale dadkii banaanbaxayay waxa ay ku dhawaaqayeen hadalo ay ku muujinayeen sida ay uga soo horejedaan faragalinta dowlada Qatar ay ku hayso Soomaaliya iyada oo lacag u soo dhiibta nin ay ku sheegeen in uu yahay gacab ku dhiigle khatar ku ah jiriyaanka qaranimada Soomaaliya. Fahad Yasin iyo sawirka Amiirka qatar ayaa la is barbardhigay iyada oo labada lagu eedeyay in ka danbeeyaan xasilooni darida ka jirtya Soomaaliya.
Halkaan ka daawo sawirada iyo Video banaanbaxa:
Previous articleCiidanka Booliska oo weeraray guriga Sargaal Caan ah (Aqriso)
Next articleMaxaa ku soo kordhay Bom Gacmeedkii lagu weeraray saldhiga Booliiska Deg. Warta Nabadda?
Deni” Shirka in uu fashilmay waxaa qayb ka ahaa qeeybsiga kheeyraadka dalka oo la isku fahmi waayay”
Farmaajo oo gadoodka ciidanka ku eedeyay Shiikh Sharif iyo Xassan Shiikh
Wararka March 21, 2019